Melohin’ny ao Karaiba ny fanapahankevitr’i Trump hamerina an’i Kioba ho ao anaty lisitry ny mpampihorohoro; Antenainy ny fanafoanana izany miaraka amin’i Biden · Global Voices teny Malagasy
'Tsy ampy hanondroana an'i Kiobà toy izany ny fitondrantenany iraisampirenena'
Voadika ny 13 Febroary 2021 16:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Nederlands, Français, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 20 Janoary 2021)
Aloky ny filoha amerikàna teo aloha, Donald Trump, mipetaka eo amin'ny saina amerikàna. Sary an'i IoSonoUnaFotoCamera tao amin'ny Flickr, CC BY-SA 2.0.
Talohan'ny nandaozan'ny filoha amerikana teo aloha, Donald Trump, ny toerany, tamin'ny 20 Janoary, marobe ny ezaka nataon'ny fitantanany mba “hanakatonana” resabe politika sasantsasany, isan'izany ireo fameperana fanampiny momba ny fifindramonina. Kanefa, ny hetsika tena nampitroatra ny hatezaran'ny Caribbean Community (CARICOM), dia ny fanapahankevitry ny governemantan'i Trump hamerina indray an'i Kiobà ho ao anatin'ny lisitra nataony ho an'ireo firenena mpanohana ny asa fampihorohoroana.
Na tsy firenena mpikambana ao anatin'ny CARICOM aza i Kiobà, noho ny resaka sisintany dia manana fifamatorana akaiky amin'ireo firenena hafa ao amin'ny faritra ilay firenena—fifamatorana ara-kolontsaina, ara-toekarena, ary amin'ny resaka fahavonoana hanao ny tsara—nahatonga ilay vondrompiarahanonina hanao fanambaràna iray momba ilay fanapahankevitra nampidirana an'i Kiobà ho ao anatin'ny lisitry ny Departemantam-panjakàna amerikàna misy ireo firenena, izay lazaina fa tsy mifanome tànana tanteraka amin'ireo ezaka hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana.
Amin'ny fiantsoana io fanapahankevitra io ho “samirery,” nomarihan'ilay taratasy navoakan'ny CARICOM fa:
Ny fitondrantena nasehon'i Kiobà nanoloana izao tontolo izao dia tsy manamarina velively ny fanasokajiana azy toy izany. Ity fanafihana lasa lavitra kokoa atao an'ilay firenena ity dia manohintohina ny satany iraisampirenena sy ny fivoarany ara-tsôsialy, amin'ny maha-olona ary ny ara-toekarena, no sady hetsika iray diso toerana manampy ny fahirano ara-bola sy ara-toekarena tsy mitondra vokatsoa efa nampiharin'i Etazonia tamin'io firenena iray ao Karaiba io.
Nandresy lahatra hanafoanana io fanapahankevitra io ny CARICOM, ary namoaka fanambaràna fa niandry hatrany ny hanitsian'i Etazonia ny fifandraisany amin'i Kiobà.
Hatramin'ny 1959 naha-praiminisitr'i Kiobà an'i Fidel Castro sy nametrahany ny fanjakàna sôsialista, tantara iray lavabe sy navesatra no nisy tamin'ny fifandraisana diplaomatika teo amin'ny firenena roa tonta. Na mifanakaiky ara-jeografika aza ry zareo, nangatsiaka hatrany ny fifandraisana teo amin'i Etazonia sy Kiobà hatramin'ny fepotoana nitondran'ny filoha Barack Obama, izay nanao hetsika hamerenana ny fifandraisana diplaomatika. Tamin'ny 2015, nalàna tao anatin'ilay lisitra izay misy azy indray ankehitriny i Kiobà, ary taona iray taorian'izay, nanatanteraka fitsidihana nanan-tantara tao amin'ilay nosy ny filoha tamin'izany fotoana izany—ny voalohany indrindra nataona filoha amerikàna amperin'asa tao anatin'ny efa ho 90 taona.
Ny mifanohitra amin'izay, naverin'ny fitantanan'i Trump nampidirina ireo teritery amin'ny fandraharahàna sy ny fivahinianana mankany Kiobà, ary ho fiarovan-tenany dia nolazaina fa ireo fepetra nohalefahan'i Obama “dia tsy manampy ny vahoaka kiobàna—fa manao fotsiny izay hampitombo harena ny fitondrana kiobàna”. Nampanantena i Trump ny tsy hanaisotra ireo sazy raha tsy afahana daholo ireo rehetra gadra noho ny pôlitika, raha tsy hajaina ny fahalalahana (anatin'izany ny fahalalahana mamory olona), raha tsy avela ho ara-dalàna ireo antoko pôlitika rehetra ary misy fifidianana malalaka atao ao Kiobà.
Ho hita eo hoe toerana toy ny ahoana no horaisin'ny filoha Joe Bidena amin'ny resaka fifandraisan'i Etazonia sy Kiobà. Ny filankevitry ny ao Karaiba dia nilaza fa manantena hahita ilay fitantanana vaovao hamerina indray ny fifandraisana arak'asa amin'ilay nosy, saingy toa tsy ho izany no hisy hoy ireo Kiobàna sasany mpaneho hevitra.
Na ahoana na ahoana, antenain'ny CARICOM ny hanesorana an'i Kiobà tsy ho ao anatin'ilay lisitry ny Fanjakana Mpanohana ny Asa Fampihorohoroana—ary andrenesam-peo ihany koa ny avy ao Kiobà.
Ny sehatra multimedia El Toque dia nizara andiana sarimiaina izay manome, amin'ny alalan'ny hatsikana, fomba fijery miditra lalina momba ilay fanapahankevitra, tamin'ny filazàna fa ity “fihetsika farany nataon [i Trump] ity tamin'ireo mpifidy tao Florida atsimo no “mety” vao mainka hanaratsy ny fifandraisana efa simba rahateo eo amin'ny firenena roa tonta”:
Miteraka andiana sazy ara-bola sy ara-barotra io hetsika io, izay ao anatin'ny fotoana maharitra, hampivangongo fahasahiranana bebe kokoa ho an'ireo olontsotra Kiobàna, izay efa miatrika fahasarotana marobe noho ny tsy fahampiana isanandro.
Amin'izao fotoana izao, fotoana efa iaretantsika ny ratsy indrindra amin'ny olana ara-toekarena ateraky ny valanaretina COVID-19 […] no tonga ilay fihemorana.
Io karazana tsy fitoviana tadin-dokanga io dia tsy hitondra vokatsoa velively ho an'ireo latsaka an'elanelany, takalonaina vokatry ny fanaovana an-tendro ary ny fankahalàna ny toerana misy ny fahefana.
Tao anaty lahatsoratra iray hafa, El Toque nitanisa an'i Collin Laverty, manalpahaizana iray momba ny fifandraisana Etazonia/Kiobà, izay nanamarika fa ny fampiatiana ho ao anatin'ilay lisitra “dia mitarika koa sazy hafa araka ny lalàna izay manasazy ireo olona sy firenena manao fifanarahana ara-barotra sy miaraka amin'ireo fanjakana mpanohana.”
Mandritra izany fotoana izany, ny gazetim-panjakana ao Kiobà Granma dia nampiako ny toerana raisin'ny birao mpandrindra ny Hetsik'ireo Tany Tsy Momba ny Atsy na ny Aroa izay milaza fa “tsy mitombina” ny fanondroana ilay nosy ho toy ny fanjakana mpanohana ny asa fampihorohoroana.
Ireo firenena hafa hita amin'izao fotoana izao ao anatin'ilay lisitra dia i Korea Avaratra, Iràna ary Siria.